“ရင်းနှီးထားသမျှ မဆုံးရှုံးရဖို့” - Young Insurance General
Home » Article » “ရင်းနှီးထားသမျှ မဆုံးရှုံးရဖို့”
Category : Article, Insurance | Date : March 12, 2020
အောင်မြင်ဖို့ ၊ ထူးချွန်ဖို့ ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် လူသားတွေ ကြိုးစားကြတယ်. ကြိုးစားရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာအောင်မြင်မှုရမှာ သေချာတယ် ဆိုပေမယ့် အခက်အခဲတွေများလေလေ အောင်မြင်မှု ရဖို့ နောက်ကျလေလေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်…
အခက်အခဲတွေဖြစ်လာရင်တော့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားလို့ရတာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ….
ဒါကြောင့် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြတဲ့ ကုန်သည်ကြီးတွေ ၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူတွေ အနေနဲ့ ကြိုးစားထားသမျှ အမြတ်အစွန်းတွေရအောင် သယ်ယူ ပို့ဆောင်တဲ့အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးခဲ့ရရင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို မဖြစ်ရအောင် အာမခံ အကာအကွယ်ကို မဖြစ်မနေ ရယူထားသင့်ပါတယ်…
(၂)ကုန်းလမ်းကုန်စည်အာမခံ ဆိုပြီး အသီးသီးရှိပါတယ်…
စစ်နှင့်စစ်အသွင် ၊ သပိတ်၊ အဓိကရုဏ်း ၊ လူထုအုံကြွမှု ၊ ဆိပ်ကမ်းရက်လွန်ကြေး စသည့်အပိုအကာအကွယ်များကို ရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်…
← မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှု အာမခံလျော်ကြေးငွေ (၁,၃၀၀,၀၀၀) ပေးအပ်ခြင်း | 2020 Staff Party (Yangon) →